1756-IF16 Allen Bradley, Ndi na - eweta - China - HuiTong Industry Company Limited
.Lọ > Ngwaahịa > Rockwell Automation > Allen Bradley PLC > 1756-IF16
Ika:Rockwell Automation Allen Bradley
Ọnọdụ:Brand New, emechiri ulo oru
Nkọwa:Ogwe Njikwa ControlLogix 16 Pt A / I
Akwụkwọ ikike:12 ọnwa ụwa
Allen-Bradley 1756-IF16 bu ihe analog iche iche ugbu a / voltaji I / O modulu. Iji jikọọ chassis ControlLogix, 1756-IF16 chọrọ ngbanye akara nke RTB ma ọ bụ mbugharị igbe maka 1756-TBS6H ma ọ bụ 1756-TBCH. Igwe ntinye nwere ihe iri na isii dịnụ. N’adịghị ka modulu ndị ọzọ, 1756-IF16 na-enye ndị ọrụ ohere ijikọ modulu n'ụzọ dị iche iche.
Enwere ike iji eriri 1756-IF16 rụọ ọrụ na ụzọ atọ dị iche iche, dabere na njirimara na ntinye nke ngwa: wiring na-ejikọ otu, wen ọdịiche, na ụdị ọsọ dị elu. Mgbe etinyere ngwaọrụ ntinye ọ bụla, a na-eji eriri na-ejedebe. Nke a bụ iji tụọ ọdịiche dị n'akụkụ akụkụ nke ntinye akara na ala mgbama, nke igwe ahụ ji arụ ọrụ iji mepụta data dijitalụ maka onye njikwa ahụ. Nwere ike mezue wiring 16 na-ejedebeghị. Mgbe ngwa ahụ enweghị ala nwekọrọ ma ọ bụ nwee ụdị akara akara dị iche iche, a na-atụ aro ka ịgbanye ụzọ dị iche. Wzọ ikuku a dabara adaba maka gburugburu ebe ekwesịrị ịbawanye mgbochi mkpọtụ. Anaghị edobe ọwa dị icheiche na ibe ya.
1756-IF16 kwuru okwu:
Ọ bụrụ na otutu akara ndenye nwere ọdịiche dị iche iche nwere ntụnye ekwenti iche, otu ọwa nwere ike imetụta ịgụ ọwa ọzọ. Mgbe nke a mere, onye ọrụ ahụ kwesịrị ijikọ ntinye ya na module ọzọ ma ọ bụ jiri ihe ntinye aka dịpụrụ adịpụ dochie ihe ndabere na-enweghị ya. Oge 1756-IF16 na-enye ohere njikọ asatọ na ọnọdụ a. Na mmechi, uzo eji agba elu di iche na ihe di elu nwere ike ihu mmelite data. Agbanyeghị, onye ọrụ ahụ ga-enwerịrị ọnọdụ ụfọdụ iji rụọ ọrụ ọkụ ọkụ. Nke mbu, o na - eji uzo uzo di iche. Nke abuo, na mode a, o nwere ike ibu uzo obula n’ime uzo ihe ato n’ime modul.
Ike nke modulu 1756-IF16 bụ 2.3 watts, ike nke backplane bụ 2.33 watts. Mpaghara ntinye ya bụ vol 10 volts, site na 0 ruo 10 volts, 0 to 5 volts, or 0 to 20 mA. Ihe eserese nke ugbu a bụ modulu 5. 1 V bụ 150 mA, ma ọ bụ 24 V bụ 65 mA. Igwe ọkụ ọkụ na ogo dị ugbu a nke backplane bụ DC 5.1 V, kacha 150 mA, kacha DC 24 V, 65 mA. Usoro ntinye nke ugbu a bụ 4 ruo 20 mA, oke ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ bụ -10 ruo 10 V, yana ya pere mpe na 100VA. Ike ikike voltaji dị ihe dị ka watts 2.3 ma ikike nke ugbu a bụ 3.9 watts.
Igwe ọkụ 1756-IF16 nwere ọkụ ọkụ nke 7.84 BTU / awa na ugbu a nke 13.3 BTU / awa. O nwekwara nchekwa overvoltage ruo 30 V DC (voltaji) na 8 V DC (nke dị ugbu a). Ike ikike voltaji dị ihe dị ka watts 2.3 ma ikike nke ugbu a bụ 3.9 watts. Mwepu ikpo ọkụ nke voltaji bụ 7.84 BTU / hour ma ugbu a bụ 13.3 BTU / awa. Ihe 1756-IF16 nwekwara nchedo overvoltage rue 30 V DC (voltaji) yana 8 V DC (nke dị ugbu a). Ike ikike voltaji dị ihe dị ka watts 2.3 ma ikike nke ugbu a bụ 3.9 watts. Mwepu ikpo ọkụ nke voltaji bụ 7.84 BTU / hour ma ugbu a bụ 13.3 BTU / awa. O nwekwara nchekwa overvoltage ruo 30 V DC (voltaji) na 8 V DC (nke dị ugbu a).
Gịnị mere ịhọrọ anyị
N'IHI gịnị ka ịhọrọ?
Ihe karịrị afọ iri na mbupụ ahụmịhe maka ngwaahịa akpaaka nke ụlọ ọrụ!
ANY S ere ahịa akụkụ bụ ozi anyị! Anyị na-eburu ozi a ma gaa n’ihu ime ya mgbe niile!
100% zuru ezu mbụ ụlọ ọrụ mbụ mechiri akụkụ.
Puku kwuru puku akụkụ na ngwaahịa!
Warelọ nkwakọba ihe nchekwa na nchekwa nchekwa nde 2.5 nde Allen Bradley!
Tags na-ekpo ọkụ: 1756-IF16 Allen Bradley, Ndi na-ebugharị ya, N'ogbe, Zụrụ, China, ọnụahịa dị ala, ndepụta ọnụahịa, Nkọwapụta